Ixabiso lokulinganisa ukuHanjiswa xa kuthelekiswa namaxabiso ebhokisi yebhokisi yebhokisi ... Martech Zone
NgoLwesibini, Februwari 2, 2016 NgeCawa, nge-15 kaJanuwari 2017 Douglas Karr
Ukuba i-Postal Service ibinenkunkuma yenkunkuma kwindawo yabo kwaye, ngalo lonke ixesha bebona isiqwenga seposi esingenamsebenzi singena bayiphosa yonke enkunkumeni, ungabiza oko kuhanjisiwe? Akunjalongo noko! Okumangalisayo kukuba, kwishishini lokuthengisa nge-imeyile nayiphi na i-imeyile eziswe kwifolda yogaxekile ibalwa njenge Nikelwe!
Ngenxa yoko, ababoneleli nge-imeyile bayazenzela ukuhanjiswa amanqaku ngokungathi bayinto abanokuzingca ngayo. Ngelishwa kubathengi babo, nangona kunjalo, igama lomthumeli, elidityaniswe nomgangatho weedilesi zabamkeli kwidomeyini nganye, zidityaniswe nomxholo we-imeyile zinokuvelisa kakubi ukubekwa ebhokisini kubathengisi. Le ayisiyonto bayichazayo, nangona.
Kungenxa yoko le nto iinkampani zifuna iinkonzo zamaqonga anje 250ok. 250ok ibonelela abathumeli ngoluhlu lwembewu olujongiweyo ukubona ukuba ingaba iphulo liyayenza okanye hayi kwifolda yogaxekile. Oku kubonelela ngentengiso ngayo yonke ingxelo eyimfuneko abayidingayo yokujongana neengxaki kunye nokulungisa imiba yokuhanjiswa-nokuba kungumgangatho woluhlu, umgangatho womxholo, okanye imiba yeziseko zophuhliso.
250ok ngabaxhasi beMartech kwaye sisebenzisa iqonga labo ukubeka esweni kunye nokuphucula ukubekwa kwethu kwebhokisi engenayo. 250ok uyathanda ukuyibiza le Ixabiso lokwenyani lokuhanjiswa. Ukubeka esweni oku kubekwa kunokuthetha amawaka eedola kukwanda okuvulekileyo, ukucofa kunye nokuguqula amaxabiso kubathengisi be-imeyile.
tags: 250okukuhanjiswa kwentsomiUmgangatho wokuhanjiswaamaxabiso okucofa i-imeyileiqonga lokuhanjiswa kwe-imeyilei-imeyile yebhokisi yebhokisiimeyile evulekileyo amaxabisoiqonga le-imeyileUluhlu lwembewu ye-imeyileabathumeli be-imeyileizinga lebhokisiamazinga ebhokisiuluhlu lwembewuIxabiso lokwenyani lokuhanjiswa